माउन्टेन हाइड्रोको नाफा १ करोडभन्दा बढी : ईपीएस कति ? | शुभयुग
माउन्टेन हाइड्रोको नाफा १ करोडभन्दा बढी : ईपीएस कति ?
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख ३१, शुक्रबार (१ साल अघि)
३१ बैशाख,काठमाण्डौ – माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वितीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीले आकर्षण प्रगति गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले १ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनी १० करोड १० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो।
चैत मसान्तसम्म कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ४१ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस्तो आम्दानी गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २१.८० प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्षको सोहि अवधिसम्म कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
चैत मसान्तसम्म कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। चुक्तापुँजी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १ रुपैयाँ ३२ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ८८ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ।